▷ ▷ OKR nazo zonke iimfihlo zayo
yokuqalisa >> U ku velisa >> I-OKR (iinjongo kunye neziphumo eziphambili)
Kulungile ukusuka kwiinjongo zesiNgesi kunye neziphumo eziphambili, oko kukuthi, iinjongo kunye neziphumo eziphambili, yindlela yokucwangcisa.
Isetyenziselwa zombini kwinqanaba lobungcali, kwimizi-mveliso okanye kwimveliso kunye nakwinqanaba lomntu. Ewe sisixhobo esihle sokuphucula imveliso yakho, sigxile kwimisebenzi ephambili kwaye sikhule ngokukhawuleza.
Ayisekelwanga kwinjongo. Iinjongo zedatha engenakulinganiswa. Into esifuna ukuyifezekisa kodwa enokuseta kwaye ilinganiswe ngokuchanekileyo.
Inkqubo yenzelwe ukusebenza kwizinto ezibaluleke kakhuluUkwazi ukubeka phambili imisebenzi eza kusinceda sifezekise injongo esifuna ukuyiphumeza
Ungaqala ukufaka isicelo ngokwakho kwimisebenzi nganye ukuze ubone ukuba iyasebenza kwaye wandise amasebe nakwinkampani iphela. Akukho mfuneko yokuba inyanzeliswe kuwo wonke umntu ngaxeshanye ukusuka kubaphathi.
Ukuba iqela lomsebenzi liyayisebenzisa kwaye lifumana iziphumo ezilungileyo, ziya kufuna ukuqhubeka nayo kwaye amanye amaqela okanye amasebe aya kufuna ukumilisela indlela yokusebenza.
Siqhele ukuva malunga Indlela yeKhanban , Ngqo ngexesha, Ukushishina kogqiyamaIsikram, njl.
Kuya kufuneka uqale ngenjongo enye, ubuninzi be-2 ukuze ukwazi ukugxila ekufezekiseni.
Iinjongo kufuneka zibe namabhongo ngokwaneleyo ukuba sizame ukufezekisa kodwa hayi into esiyaziyo ukuba ayinakwenzeka ukuba siyifezekise.
Imalunga nendlela esiza kuziphumeza ngayo iinjongo zethu.
Kuya kufuneka zilinganiswe kwaye zibe nezenzo eziphathekayo. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba bayalinganiswa kwaye banefuthe ekufezekiseni injongo.
Uzalelwe kwi-Intel, inkampani ekhokelayo kwitekhnoloji kwicandelo elinokhuphiswano kakhulu iminyaka emininzi. UAndrew Grove uthathwa njengoyise wendlela ye-OKR
Isigaba sakhe esilandelayo sophuhliso sasiseGoogle, apho wayekhokelwa nguJohn Doerr. Ukumiliselwa kwendlela yokufezekisa iinjongo zokukhula zeYouTube kunye neChannel.
Ezi meko zinokusenza ukuba sicinge ukuba yenzelwe iinkampani ezinkulu, okanye iinkampani zetekhnoloji, kwaye akukho nto iqhubekayo kwinyani, umlingo we-OKR kukuba sinokuwusebenzisa kwizikali ezahlukeneyo, ubukhulu kunye nemisebenzi, nokuba yindlela yokukhula kunye nophuculo lomntu.
Inceda ukuba ichaze iinjongo kwaye ikhethe indlela yokufezekisa. Isixhobo okanye inkqubo.
Izinto zenkqubo ye-OKR
Kungenxa yoko le nto, kutheni izinto zisenziwa, kutheni sifuna ukufezekisa iinjongo. Yintoni esishukumisayo
Iinjongo zezi yintoni. Yintoni esifuna ukuyiphumeza ukuze injongo yethu izaliseke
Njani. Sifuna njani ukufezekisa iinjongo zethu. Ngawaphi amanyathelo esiza kuwathatha. Ikhonkrithi kunye nezenzo ezinokulinganiswa
siziguqula njani iziphumo eziphambili zibe yimisebenzi esiyibeka kwishedyuli yethu yomsebenzi.
Kukho izinto ezingaphezulu
Amagunya amakhulu, i-CFR, iNkcubeko, ubuNkokeli, ukungafihli nto. Kodwa ezona ziphambili xa ucwangcisa inkqubo yethu ye-OKE zezokuqala.
Kwaye konke oku kuqondwa ngcono ngemizekelo
Kutheni le nkqubo ithembisa kangaka kwaye yahluke njani kwezinye iiklasikhi, ukuba ukuza kuthi ga ngoku ibonakala njengenye nje ngaphezulu?
Inamandla kakhulu kuba iyasinyanzela ukuba sigxile kwinjongo enye okanye ezi-2 zokungafezekisi. Kwaye ukucwangcisa kwangaphambili iziphumo eziphambili ekufuneka siziphumezile ukufikelela kuloo nto, kodwa yonke into iyalinganiseka kwaye ayinakulinganiswa.
Izizathu zokusebenzisa i-OKR
Ungaqala encinci, umntu omnye okanye iqela elincinci kwaye emva koko udibanise yonke inkampani. Kuyafana neenjongo, kunokwenzeka ukuba uqale encinci encinci ukuze kamva ubenamabhongo.
ICFR. Incoko, Ingxelo kunye noKwamkelwa. Oko kuyakunceda ukuba ufumane inkxaso kunye nokwamkelwa kwabaphathi bethu kunye noogxa bethu
Ukugxila, yindlela esekwe kwiforum kwinto esiyenzayo, iyasinceda ukuba sigxile koku kubaluleke kakhulu ekufezekiseni injongo yethu. Njengokuba simvile uPareto ekhankanya amaxesha amaninzi nge-20% / 80% yakhe edumileyo. Nge-OKR singagxila kuloo ndawo ibalulekileyo.
Ukusekwa kweenjongo, kulula xa siqala ukudida injongo kunye nenjongo engenakhonkrithi okanye engenakulinganiswa.
Kwaye ke kukho ukunyamezela, ukunikezela ixesha eliyimfuneko kunye nokugxila okufanelekileyo ukutyala ixesha kweminye imisebenzi.
Ukuphucula imveliso yeqela lomsebenzi.
Iziphumo eziphambili 1: Onke amalungu eqela asebenzisa isixhobo esinye sokusebenzisana, njengeTrello okanye iBasecamp, ubuncinci kube kanye ngosuku.
Iziphumo eziphambili 2: Onke amalungu eqela athatha inxaxheba kuqeqesho kubuchule bokuvelisa kunye nokupasa uvavanyo lwasemva kovavanyo.
Isiphumo esiphambili 3: ixesha elinikezelwe kwiintlanganiso lincitshiswe ngama-50% ngokusebenzisa ukuphuculwa ekuphunyezweni kwalo njengokufumana i-ajenda yeentlanganiso.
Fumana abathengi kwicandelo apho inkampani ingakhange isebenze kude kube ngoku.
Isiphumo esiphambili 1: fumana amacandelo ama-3 anomtsalane nalapho inkampani inokongeza ixabiso.
Isiphumo esiphambili 2: Chonga iinkampani ezi-5 kwicandelo ngalinye elinokuchaphazeleka ekubeni ngabaxhasi.
Iziphumo eziphambili 3: Chonga abafowunelwa aba-2 kwinkampani nganye ukwenza utyelelo lwentengiso.
Iziphumo eziphambili 4: Fumana ubuncinci iintlanganiso zeshishini ezili-10.
Iziphumo eziphambili 5: Yenza okungenani izindululo ezi-5 zorhwebo.
Imithombo yolwazi kunye neereferensi
Sishiya izinto ezahlukeneyo ukuze uqhubeke nzulu kwaye ufunde Indlela ye-OKR
Incwadana ye-OKR eyenziwe ngu I-Sngular
Incwadana yemigaqo, itemplate kunye neecheatsheets UFelipe Castro
I-TPM (Ulondolozo lulonke lweMveliso)
izigaba U ku velisa Ukuhamba kwetikiti
Umbelekisi ongumbelekisi (Alytes obstetricans)
3 Imbali ye-OKR
4 OKR yeenkampani
5 Izinto zenkqubo ye-OKR
5.2 Ukukhetha iinjongo
5.4 Kukho izinto ezingaphezulu
6 Kutheni le nkqubo ithembisa kangaka kwaye yahluke njani kwezinye iiklasikhi, ukuba ukuza kuthi ga ngoku ibonakala njengenye nje ngaphezulu?
7 Izizathu zokusebenzisa i-OKR
9 U mzekelo
10 Imithombo yolwazi kunye neereferensi